‘हाउ फन्नी’: धमलाको हमला ! « Mazzako Online
‘हाउ फन्नी’: धमलाको हमला !
मज्जाको अनलाईन, फागुन २३ गते शनिवार, २०७१, काठमाण्डौं ।
रिपोटर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषी धमला यसै पनि सधै चर्चामा हुन्छन् । क्यामेरा देख्नै हुन्न, उनी मरिहत्ते गर्दै क्यामेराको अघिल्तिर उपस्थित भईहाल्छन् भन्ने चर्चा त चलेको नै हो । केही समय अघि नेपाली राष्टिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्कालाई लिएको अन्तरवार्ताले त सनसनी नै मच्चाएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि उनको नाममा निकै फन्नी जोकहरु हिट भए ।
अब उनै सधैव चर्चाको शिखरमा रहने पत्रकार धमला चलचित्रमा हमला गर्दैछन् । चलचित्रको नाम हो ‘हाउ फन्नी’ । ‘हाउ फन्नी’मा कस्तो फन्नी अभिनय गरेका छन् धमलाले त्यो भने चलचित्र प्रर्दशनमा आएपछि नै थाहा होला । तर, निर्देशक निलु डोल्माका अनुसार भने उनलाई पत्रकारकै भुमिकामा ठुलो पर्दामा देख्न पाईनेछ । निलु डोमा शेर्पाको डेब्यु निर्देशकिय फिल्म ‘हाउ फन्नी’ मा पत्रकार धमलाले केमियो रोल गरेका छन् ।
‘स्क्रिप्टमा ऋषिजीको जस्तै क्यारेक्टर थियो । एक पटक उहाँलाई नै खेल्न प्रस्ताव गरी हेरौं न भनेर फोन गरेका थियौँ’, चलचित्रकी निर्देशक निलुले भनिन्– ‘कहिले हो सुट, म आउँछु भनेर वहाँले तुरुन्तै जवाफ दिनुभयो ।’ निलुका अनुसार फिल्ममा धमलाले पत्रकार सम्मेलनकै प्रतिनिधित्व गरेको देख्न पाईनेछ । पत्रकार धमलाको दृश्यलाई दर्शकले भरपुर मनोरञ्जन लिने पनि निर्देशक निलुको दाबी छ । यता धमलासँगै उक्त दृश्यमा देखिने नायिका प्रियंका कार्कीले पनि उक्त दृश्यलाई दर्शकले ‘इन्जोए’ गर्ने बताइन् ।
‘सिन अनुसार हामी एउटा पत्रकार सम्मेलनमा हुन्छौ , झन् प्रश्नकर्ता ऋषि सर भएसी त्यो दृश्य हामीलाई रियल झैँ लाग्यो र आश छ दर्शकले पनि मनोरञ्जन लिनु हुने छ’, प्रियंकाले काम गर्दाको अनुभव सुनाइन् ।
जेठ १५ गतेदेखि सार्वजनिक प्रर्दशनमा आउने चलचित्र ‘हाउ फन्नी’मा प्रियंकासंगै दयाहाङ राई , केकी अधिकारी , अनुप बिक्रम शाही , निशा अधिकारी , शिशिर राणा लगायतको अभिनय रहेको छ । हाउ फन्नीकी कार्यकार िनिर्माता भने माल्भिका सुब्बा हुन् । फिल्मलाई शान बस्न्यातले लेखेका हुन् । संगीत शैलेश सिंह , सुरेश अधिकारी र शैलेन्द्र श्रेष्ठको रहेको छ भने यस चलचित्रलाई हरि हुमागाईले खिचेका हुन् ।